ရပ်တည်မှု၊ နားလည်မှု – ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ပေါ့
This entry was posted in စိတ်ထဲရှိသမျှ and tagged co-operative, Development, Expectation, Life, World of Conflict. Bookmark the permalink.
← ဆင်ခြေ၊ ဆင်လက် ၊ ဆင်နားရွက်
3 thoughts on “ရပ်တည်မှု၊ နားလည်မှု”
MrDBA | June 11, 2009 at 12:02 am
ဟူးးးးးးးးးးး ….. (သက်ပြင်းချသွားသည်။)
ကိုသာသာ | June 11, 2009 at 1:36 pm
ကျွန်တော်ပါ ရောပြီး သက်ပြင်း ချသွားပါသည်။
ကုမ်ရာသီသူ | June 13, 2009 at 12:51 am
ကိုကြီး ဒီဘီ, ကိုသာသာ>> အဲဒီလိုတွေ ရေးထားမိလို့ အားနာပါတယ် ပြောတာ။ ကိုယ်တွေ့ ကိုယ်တွေ့ မှတ်တမ်း ရေး…….. (ချစ်ကောင်းသီချင်း)